Yakha iDrone, iProjekthi yeNyana yoNzululwazi-iGeofumadas
Yakha iDrone, iProjekthi yeNzululwazi yoNyana wam
Akubonakali ukuba lesi si sidalwa esifanayo kwiminyaka embalwa edlulileyo, yammangalisa ngamandla akhe isitofu segesi.
Ixesha lihamba ngokukhawuleza kunokuba libonakala. Ubuncinci ibonisa kwiinwele ezingwevu kunye nokuvela kwemibuzo yakhe:
Endaweni yoku-odola umdlalo omtsha weselfowuni, wandicela ilayisensi yakwaSony Vegas. Ndiyithandile into yokuba akanambeko wokuqhekeza.
Ngifuna ukwenza i-drone yakhe, ndifumanise ngaphezu kokuthakazelisa.
Ukweyisela utitshala yayingumceli mngeni wokuqala, xa wathi abanye abafundi baphupha ngeeprojekthi ezingabonakali nje zibiza kakhulu, kodwa zinokubanomdla. Unyana wam ukholelwa ukuba yayingezizo iinjongo ezimbi, kodwa kukungazi kancinci. Ngokukodwa xa echaza ukuba izinto aza kuzithenga ngengeniso yakhe kwisiteshi seYouTube, ngePayPal.
Ngoko ukubetha iphrojekthi echaphazelekayo ichaza amagama athengisiweyo, yi-PayPal, i-AdSense, iCrowfunding kunye namanye amagama awayekho kwisichazi sakho.
1. Izixhobo zedrone.
Le namhlanje ayinzima. Bathengwa kuphela kwi-Intanethi, bathunyelwa kwibhokisi yeposi eMiami kwaye kwisithuba esingaphantsi kweeveki ezimbini basemnyango wendlu.
Iimoto ezine, ezine-propellers ezine, iifowuni ezine, i-motherboard, i-lipo ibhetri, i-4 propellers kunye nezixhobo ze-4 zokudibanisa umsakazo ekhadini.
Loo suku wawungaphezulu kwezemfundo, njengoko sifanele sifunde ukusebenzisa i-screwdrivers, ugxinise isicatshulwa kwisithethi, funda ukusika iintambo, sebenzisa isinyithi esinyukayo kwaye uvavanye ukufudumala komnwe wakho.
Okwangoku kwakufuneka ukuba banike iiklasi zentetho kunye nendlela yokukhusela isifundo esiyinkimbinkimbi phantsi kwemiqathango eqhelekileyo.
Ukunikezela kwesibingelelo sokuqala sokutshiswa kwakuhlanganisiwe.
Eyona nto inzima yayikukuqinisekisa ukuba abayichukumisi ipleyiti kwaye bayonakalise nge-static emsulwa. Ukwenza iinkqubo ezikude kwakulula, kodwa ukumisa abaxhasi kwathatha ixesha… ubusuku bafika.
4. Iingozi emsebenzini.
Emini kwafika saqonda ukuba sidinga izixhumi, iteyiphu yombane kunye nento yokulungisa izikrufu ngokuchaseneyo nentshukumo. Uhambo lokuqala kwivenkile yehardware kwaye uthenge into yesidlo sasemini, kuba ngoMhla woMama akukho nto ekhitshini.
I-Damn JR eyindoda kwiintambo zamadoda zazingekho kwibhili yezixhobo. Kuthathe ijuggling ukuzifumana. Ikhadi lokwenziwa kwenkqubo livela nangaphandle kwe-United States, ke kuye kwafuneka icele enye nge-DHL, ngenye imini enye iza kuvela e-China.
Xa kungeyiyo yonke into esebenzayo, kuya kufuneka ulume iinzipho zakho ukhangela i-Intanethi. Ngolunye uhlobo.
Kwaye ekuphelelweni, cela umntu kwi-Skype, isihawu sokuba isisombululo sewebhu webcam sibi kakhulu ...
Kwiinjongo zakhe, umakhi wezakhiwo kunye neenjineli zenkqubo ezimbini.
Silayisha ezinye iifoto kwi-Facebook, kwaye sele sele zinikele ukudubula ezinye izibhengezo ze-sky.
Nangona bafuna ukukhusela le projekthi eklasini, bngenani ubunzima bama-50 centimeters kwaye uqinisekise uthisha ukuba imithetho ebonakalayo yomzimba iyabaluleka njengokuba inkani enokuboniswa, ukuyikhetha ukuba ibe nokuma kwi-Fair.
Kwakhona ndimele ndimkholise ukuba ahlele ividiyo yenkqubo esiyibhalisayo, faka i-Guns n Roses ngasemva kwaye ujonge ukuyilayisha ngokukhululekile Isiteshi se Youtube se Geofumadas.
Akukubi ukuba yidrone yakho yokuqala. Apho ndiyabaxelela
Post edlulileyo«Ngaphambilini CHIP i $ 9 Microcomputer
Post Next Bentley Connection EventOkulandelayo »
Impendulo enye ku "Yakha iDrone, iProjekthi yeNzululwazi yoNyana wam"
UNancy Godoy uthi:
Vuyiswa! Yonke inqhayiya ngo-daddy canosin. 🙂